နာမည်ကြီးသည့် UNI TIKTOKKERS မှလန်ဒန်ရှိ UNI ဘဝကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည် - သတင်း
ဤကျော်ကြားသော London Uni TikTokkers နှင့်တွေ့ဆုံပါ
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကအဘို့အချိုးအောင်နှင့်ခုန်စဉ်းစားပါတယ် TikTok ကျော်ကြားမှု သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် TikTok ၏ကျော်ကြားမှုနယ်ပယ်သို့စွန့်ခွာရန်အူကြောင်ကြောင်ခြင်းနှင့်ကြယ်အရည်အသွေးမရှိကြခြင်း။ သို့သော်အချို့သောကျောင်းသားများသည်လုပ်ခဲ့ကြပြီးအထက်တန်းလွှာ London London Uni TikTokkers ဖြစ်လာသည်။
TikTok ပေါ်ရှိ London Uni hashtag တွင်သူတို့ကိုတွေ့ပြီးနောက်သူတို့ပြောခဲ့သည့် TikTokers (၃) ခုကိုပြောခဲ့ပြီးသူတို့၏အတွေ့အကြုံများအားလန်ဒန်တွင်နေထိုင်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။
၎င်းတို့အားလုံးသည် London Life၊ uni life နှင့် UCL ဘဝကိုရည်ညွှန်းသောကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများကိုပြုလုပ်သည်။ သင်၏ TikTok စာမျက်နှာအတွက်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအသစ်များကိုသင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကနောက်ထပ်မကြည့်ပါနှင့်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လန်ဒန် Uni TikTokkers အိုင်ဗင်, Dalia နှင့် Conale နှင့်တွေ့ဆုံကြပါစို့။
ဘာစီလိုနာတွင်မွေးဖွားခဲ့သော @ivansaco သည်လန်ဒန်ကိုလေ့လာရန်နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုများကိုတင်ခဲ့သည်။ ထိုတွင်သူသည် TikToks နှင့် ပတ်သက်၍ အမြင် ၆၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။
အသက် ၂၁ နှစ်ရှိ @daliawainx သည် TikTok ကိုလန်ဒန်ကျောင်းသားများအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များနှင့်သူမ၏အီရတ်အမွေအနှစ်များအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများအားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လန်ဒန် TikTokkers2pic.twitter.com/EnnyMHyXOx
- အမ်မလီ Shead (@emilyhshead) ဒီဇင်ဘာလ 8, 2020
ဘဲလ်ဖတ်မှ @conale_ သည်သူ၏ TikTok ပရိုဖိုင်းတွင်အကြိမ် ၂၀၀ ကျော်အကြိုက်ရှိပြီးလန်ဒန်တွင်နေထိုင်ပြီးလေ့လာသင်ယူမှုများအကြောင်းပုံမှန်တင်ခဲ့သည်
သင်ဘယ် uni ကိုသွားသလဲ
အိုင်ဗင် - ငါ UCL ကနေ UAL ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ
Dalia: ငါ UCL ကိုသွားတယ်
Dalia: ကျွန်ုပ်သည်4နှစ်မြောက်ဆေးဆိုင်ကျောင်းသားဖြစ်သည်
သင်သည်အဘယ်အရာကို TikToks အောင်စတင်ခဲ့သနည်း
အိုင်ဗင် - ပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အချိန်ကငြီးငွေ့စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမှုတ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ငါကြိုးစားချင်တယ်
ဒေလီယာ - ၁၂ နှစ်အရွယ်အစ်မအဲဒီမှာဘာတွေကြည့်နေတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့ Tiktok အကောင့်ကိုကျွန်တော်ခဏဖွင့်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို to ည့်ခံဖျော်ဖြေဖို့သော့ခတ်နေချိန်မှာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှသာငါ့ကိုယ်ပိုင် Tiktoks ကိုစတင်ခဲ့တယ်၊ ငါဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာငါ့ရဲ့ညီမလေးကိုမေးခဲ့ရတယ်။ အစကတည်းကကျွန်ုပ်အားသူငယ်ချင်းများကိုရောဂါကူးစက်နေစဉ်ကာလအတွင်းကျောင်းသားများ၏ရုန်းကန်မှုများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ရယ်မောရန်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုတစ်ခုမှာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့သွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်စာပို့ခဲ့သည်။
Conale: ငါအိမ်တံခါးပိတ်ပြီးကျော်အိမ်မှာရှိနေစဉ် manic ဇာတ်လမ်းတွဲကာလအတွင်းစတင်ခဲ့သည်။
အိုင်ဗင် - တစ်နေ့လုံးရုပ်ရှင်ရိုက်လေ့ရှိတဲ့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တည်းဖြတ်တာနဲ့စုစုပေါင်း ၃ နာရီပြောမယ် (ish)
ယခုငါ meme ကိုသတ်နိုင်ပါတယ်သိကြကဆုံးရှုံးသွားပါပြီ
Dalia: တကယ်ကိုမူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့အရှည်ဆုံးအပိုင်းကမူရင်းအတွေးအခေါ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပညာရေးဗီဒီယိုအသေးစားတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုပါကကျွန်ုပ်သည် ၁၅ စက္ကန့်ကလစ်တစ်ခုအတွင်းသို့ချုံ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကိုမရှာဖွေမီ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်နာရီအနည်းငယ်ကြာသုတေသနပြုနိုင်ပါသည်။
Conale: ဒါဟာတကယ်ကိုမူတည်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာသင်တစ်နေ့လုံးရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီးအချို့ကတော့ ၅ မိနစ်အတွင်းမှာရိုက်ကူးပြီး upload လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပုံကြမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဇာတ်ကောင် (အခြေခံအားဖြင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးရန်) အတွက်ပြောမည့်အကြောင်းအရာနှင့်အတူတစ်ပတ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုရိုက်ကူးရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန်တစ်နာရီခန့်ကြာခဲ့သည်။
အိုင်ဗင်: လူတွေ၊ မင်းရရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ၊ ပွဲတစ်ခုဒါမှမဟုတ်စားသောက်ဆိုင်အသစ်တစ်ဆိုင်အမြဲတမ်းရှိတာကိုငါသဘောကျတယ်
Dalia: ကျွန်တော့်အတွက်လန်ဒန်အကြောင်းအကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့မတူကွဲပြားမှုအထူးသဖြင့် UCL မှာပါ။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမြင်တွေအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ လန်ဒန်မှာ ၃ နှစ်တာကာလအတွင်းငါအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်တာကာလကထက်ငါကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မြို့ငယ်လေးမှာကမ္ဘာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်။
Conale - နေ့တိုင်း၊ ရက်သတ္တပတ်တစ်လလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မြို့သည်သင့်အားလေ့လာမှုအပြင်ဘက်တွင်သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။
အိုင်ဗင် - တစ်ခါတစ်ရံမှာသူငယ်ချင်းများနှင့်နောက်ဆုံးမိနစ်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကအမြဲတမ်းအလုပ်များနေကြတယ်
ဒေလီယာ - လန်ဒန်မှာလေ့လာခြင်းရဲ့အဆိုးဆုံးအပိုင်းကအကုန်လုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ရမယ်။ ငါ့ထင်မြင်ချက်အရသင်ဟာဘယ်နေရာမှာမှမရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတချို့ရှိနေတယ်။
Conale ။ ။ တစ်ခါတလေကျွန်ုပ်သည်ပြွန်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်မည်မျှသုံးစွဲခဲ့သည်ကိုစဉ်းစားမိသည်။
အိုင်ဗင်၊ မရသေးဘူး ငါသာငါ့နောက်ဆုံး TikToks ထံမှနောက်လိုက်အချို့စတင်ခဲ့ပေမယ့်မျှော်လင့်မကြာမီ။
Dalia: Tiktok ကငါ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ငါကြီးမားသောကုမ္ပဏီများ, အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်သဘောတူညီချက်ရှိခဲ့နှင့်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အများကြီးပိုကြီး Tiktok ဖန်တီးသူနှင့်အတူစတင်ချိတ်ဆက်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်များစွာသည်လန်ဒန်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အသိုင်းအဝိုင်းအနည်းငယ်ရှိခြင်းနှင့်လူများအားမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းများကိုမှတ်ချက်အပိုင်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်ဟုခံစားမိသည်။
Conale: မဟုတ်သေးပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်ရှားနေပါတယ်။
လန်ဒန်မှာနေထိုင်ခြင်းကသင့်ရဲ့ TikTok အကောင့်ကိုတိုးတက်စေတယ်လို့ထင်ပါသလား။
အိုင်ဗင် - သေချာတာပေါ့၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးကိုလန်ဒန်မှာအခြေစိုက်တယ်။ အမေရိကန်တွေကအဲဒီဗီဒီယိုမျိုးကိုကြိုက်တယ်။
ဒေလီယာ - ကျွန်ုပ်အကောင့်ကိုစတင်တုန်းကတကယ်တမ်းလန်ဒန်မှာမနေခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့လန်ဒန်ဟာအထင်ကရမြို့ကြီးဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အရေးကြီးတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်လန်ဒန်သို့လျှောက်ထားသူများထံမှမှတ်ချက်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများစွာသည်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်၊ ငှားရမ်းခကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုမေးမြန်းခြင်း၊ သို့မဟုတ်လန်ဒန်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အကျော်ကြားဆုံးဗီဒီယိုအချို့မှာကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများဖြစ်သည်။ လန်ဒန်ရှိအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များအပေါ်အမြင်။
Conale: ငါဘဲလ်ဖတ်မြို့မှဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံး TikToks အမြောက်အများသည်မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် la 'The Methody Girl' နှင့် 'The Culchie' ကိုတွေ့ရမည့်လူမျိုးတို့၏ရှေးဟောင်းပုံစံများနှင့်ပတ်သက်သောပုံကြမ်းများဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါလန်ဒန်မှာနေထိုင်ဖို့သေချာပေါက်ငါ့ကိုသတ္တုတွင်းကြီးထွားကူညီပေးခဲ့တယ်ဟုမပြောပေမယ့်ဒါကြောင့်ဒေသ / တည်နေရာ - သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏အကောင့်ကိုကြီးထွားဖို့ပါဝါရှိပါတယ်။
pussy ကြောင်အရုပ်၏ ဦး ဆောင်အဆိုတော်
Dalia: ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ပလက်ဖောင်းကိုမည်သည့်လမ်းကြောင်းသို့ပို့ဆောင်လိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားဘဝ၏အကြောင်းအရာသည်အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်များကိုစတင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်ပိုမိုစဉ်းစားမှုကိုဖြစ်စေသောဗီဒီယိုများဖန်တီးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ လူငယ်များသည်၎င်းတို့၏သတင်းရင်းမြစ်များကိုသူတို့၏ဖုန်းများမှရယူရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းများတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုလုပ်ရန်အနည်းဆုံးအချက်များထည့်သွင်းရန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ မကြာသေးမီကယူကေရှိဒုက္ခသည်များနှင့်ပတ်သက်သောအများလက်ခံမှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များကို အခြေခံ၍ စီးရီးတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး၎င်းကိုမည်မျှကောင်းစွာရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ ၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သောသုံးစွဲသူများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်သင်ယူခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းငါ့အားသက်သေပြခဲ့သည်။
Conale - ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးကိုအဆုံးသတ်ခြင်း။
လန်ဒန်မှာသင်အကြိုက်ဆုံးဘား / အရက်ဆိုင်ကဘာလဲ?
အိုင်ဗင်နော့ထ် (Notting Hill) ရှိ Churchill လက်နက်များသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအရက်ဆိုင်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် White City အိမ်သို့မဟုတ်အိမ်လမ်း ၄၀ လမ်းသို့မကြာခဏသောက်ရန်သွားလေ့ရှိသည်။
Dalia - ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံးအရက်ဆိုင်တွေထဲကတစ်ခုကကန်ဒန်းမှာရှိတဲ့ BYOC ပါ။ မင်းကမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်သောက်စရာတွေယူလာပေးတယ်၊ သူတို့ကအရူးအမူးဖြစ်ပြီးအကန့်အသတ်မဲ့ကော့တေးတွေနဲ့ရောစပ်လိုက်ကြတယ်။
Conale: ဒါဟာမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် Inferno ကိုပြောလိမ့်မယ်။
ဤရွေ့ကား London Uni TikTokkers အားလုံးသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်။ သင်နောက်ထပ်နာမည်ကြီး UCL TikTokker ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်သလား။